Fifidianana sy Kolontsaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2019 8:45 GMT
Ara-teknika dia tsy ahy ny lahatsoratra voalohany nataoko ho an'ny Global Voices. Nanoratra tamin'ny blaogiko, medeamaterial, aho, lahatsoratra iray mikasika ny fetiben'ny mozika tao afovoan-tanànan'i San Jose, tao Costa Rica, ary David Sasaki, izay tonian-dahatsoratra ho an'i Amerika Latina, no niteny tamiko mba handefa indray ny lahatsoratro hankany aminy ho averina havoaka. Nahaliana ahy ilay hevitra ka nijery ny tranonkala Global Voices aho ary nahatsikaritra fa tamin'ny teny anglisy izany… noho izany, nanome sosokevitra aho fa afaka mandika ilay lahatsoratra. Hitako fa nanaitra an'i David izany, ary taorian'izay dia nisy ireo fifanakalozana, nangatahiny ihany koa aho mba hanoratra kely mikasika ireo fifidianana ao Costa Rica, izay nanjary lahatsoratro voalohany. Ny faharoa dia ny lahatsoratro mikasika ny Fetibey iraisam-pirenena ho an'ny mozika, izay naveriko nosoratana indray mba hanasongadinana ny endrika fanaovana blaogy amin'ny Global Voices. Noho izany, ny lahatsoratro faharoa izany raha ny tena marina dia ilay fandefasana an'io hetsika io. Volana vitsivitsy taorian'ny nanombohana nanoratra ho an'ny Global Voices, tamin'ny fitondràna ireo fifanakalozan-kevitra nataonay tao Costa Rica ho an'izao tontolo izao, lasa tany Kolombia aho. Notohizako ny fandrakofana ny tontolombolongana tao Costa Rica, no sady nanandrana nijery ny tontolombolongana tao Kolombia, anisan'izany ny tao Medellin. Tsy dia nanana vondrom-piarahamonina goavana loatra tamin'ireo blaogy ny tanànako, saingy nahita an'ireo blaogera sahisahy vitsivitsy aho izay nanjary namako be avy eo. Niara-nandrisika ny olona izahay ho any amin'ny fanaovana blaogy, nihaona amin'ireo blaogera hafa sy ireo mpanoratra ao an-tanàna ary nampianatra betsaka an'ireo olona ny fomba fanaovana blaogy. Azonay ny iray tamin'ireo fanampiana ara-bola voalohany indrindra avy tamin'ny rising Voices ary nahazo tombony izahay hiasa tao amina trano vaovao famakiamboky niaraka tamina vondrona tanora izay naniry hianatra hampiasa ireo teknolojia vaovao.
Taty aoriana kely, natonina aho sady namporisihina mba hisoratra anarana hifaninana ho lasa mpamoaka lahatsary ho an'ny Global Voices. Nosainiko io, niketrika firotsahana tsara, nahazo ilay asa ary nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fotoana teo amin'ny fiainako izay nahazoako ny asa nofinofiko. Ny fanalàna androko, izay nataoko tamim-pifaliana sy ho an'ny fitiavana mizara tantara, dia lasa asa fivelomako. Teny amin'ny volana aho.
Noho ny Global Voices, nifankahita tamina vondrona iray tsy mampino nisy olona erantany aho. Afaka nivezivezy aho ary nizara izay fantatro niaraka tamin'ireo olona izay nampianatra betsaka ahy mihoatra noho izay azoko nampianarina azy ireo aza. Nandramako ny TSARA INDRINDRA tamin'ny tontolon'ny asa izay nananako ary nametraka ny tsivalankazo ho tena avo io: na izany aza, tsy isanandro ianao no afaka manao asa mahasoa iarahana amin'ireo olona mamiratra, manana fandavantena, mavitrika ary mahafantatra hoe ahoana no ampiasaina am-pahombiazana ireo fitaovana anaty tambajotra mba hiarahana miasa… ary azonao atao io na dia ao anatina akanjo fitondra matory aza ianao ao an-trano, miaraka amina zotra tsotra kokoa izay misy. Anisany nandray anjara tamin'ny Fihaonambe Global Voices tany Budapest aho, tany Chili ary tany Kenya, ary ny fifangaroan'ireo namana mahafinaritra, ireo toerana miavaka sy ireo fifanakalozan-kevitra manokana no nahafahan'ireny fivoriana ireny ho hita tao anatin'ny traikefa tsara indrindrako. Misy farany foana matetika ny zavatra tsara, ary raha vao nifindra monina tany Etazonia aho, tsapako fa tsy nanam-potoana intsony hanatanterahana ny asa tsara indrindra azo atao ary mendrika ho an'ny Global Voices ny hahita mendrika kokoa, noho izany nametraka fialàna aho…